Garabka Mahdi Guuleed ee Guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi oo guddoomiye doortay | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Garabka Mahdi Guuleed ee Guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi oo guddoomiye doortay
Garabka Mahdi Guuleed ee Guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi oo guddoomiye doortay
Guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ee dalka garabka uu hoggaaminayo Ra’iisulwasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa doortay guddoon ka dib doorasho ka dhacday xerada Afisyooni.
Waxaa Guddoomiyaha guddiga loo doortay Khadar xariir Xuseen, iyada oo aysan goobta soo xaadirin Afartii Xubnood ee Gudoomiye ee uu soo magacaabay Gudoomiye Cabdi Xaashi.
Doorashada ka dhacday xerada Afisyooni ayaa waxaa amarkeeda lahaa Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Goobta ay doorashada ka dhacday ayaa waxaa ku sugnaa wasiiro iyo xubno ka socday Xafiiska Ra’iisulwasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Dhanka kale, garabka Cabdi Xaashi ayaa lagu wadaa in dhankooda ay doortaan guddoon Saacaddaha soo socda taasoo sii dheereyneyso khilaafka u dhaxeeyo guddiga doorashooyinka Somaliland.
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka hadlay munaasabad ka dhacdey magaalada Muqdisho ayaa wuxuu ku eedeeyay ra’iisul wasaare Rooble inuusan dhexdhexaad ka ahayn khilaafka siyaasiyinta gobolada Waqooyi.
“Ra’iisul Wasaarahu haduu u dhinac raaco sideen u garowsan karaa Ra’iisul Wasaaraha cadaalad sameynaya, ma u arki karo, Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxaan rabnaa cadaalad.”ayuu yiri Guddoomiye Cabdi Xaashi.
Guddiga doorashada gobollada waqooyi ayaa ka kooban 11 xubnood. Afar ka mid ah xubnaha waxaa soo magacaabay Mahdi Guuleed. Afar kale waxaa soo magacaabay Cabdi Xaashi, halka saddexda kalana uu soo magacaabay ra’iisul wasaare Rooble.
Previous articleWasiirka haweenka oo farriin u dirtay madaxda maamul goboleedyada
Next articleMan City Vs Leicester City, Man United Vs Everton, & Kulamada Xiisaha Leh Ee Maanta La Ciyaari Doono – Banaadirsom